Waa maxay Waxbarashada Carruurnimada Hore | Sameynta iyo daraasadaha
Waa maxay Waxbarashada Carruurnimada Hore
Maria Jose Roldan | 19/11/2021 12:44 | Tababar
Qof kastaa maaha mid u qalma marka ay timaado waxbaridda iyo ma in waxbarashadda iyo wax-barashadu ay noqdaan shay xirfadeed, taas oo aad u qancisa qofka wax siiya. Ujeedada waxbarashada hore maahan wax kale oo aan ahayn in wax la baro wiilasha iyo gabdhaha da'doodu u dhaxayso 0 ilaa 6 sano. Runtu waxa ay tahay in ay tahay wax lagu farxo in la awoodo in lagu biiriyo hadhuudh yar oo ciid ah oo lagu barayo kuwa yaryar.
Maqaalka soo socda waxaan kula hadli doonaa si faahfaahsan wax kasta oo ka kooban Waxbarashada Carruurnimada Hore iyo sababta ay u mudan tahay in la barto oo la sameeyo.
1 Waa maxay Waxbarashada Carruurnimada Hore?
2 Maxay muhiim u tahay in laga shaqeeyo Waxbarashada Carruurnimada Hore
3 Sifooyinka barraha caruurnimada hore ee wanaagsan
4 Waa maxay fursadaha shaqo ee ay bixiso Waxbarashada Carruurnimada Hore?
Waa maxay Waxbarashada Carruurnimada Hore?
Waxbarashada Carruurnimada Hore waa marxaladda koowaad ee nidaamka waxbarashada. Waxaa ku xiga waxbarashada hoose iyo sare. Waxbarashada Carruurnimada Hore waxa ay ka kooban tahay waxbarida carruurta da'doodu u dhaxayso 0 ilaa 6 sano waxayna ka kooban tahay saddex nooc oo meelo kala duwan: madaxbannaani, aqoonta deegaanka iyo horumarinta luqadda ugu fiican.
Waxbarashada Carruurnimada Hore waxa loo qaybin doonaa laba wareeg: midda kowaad waxa lagu bartaa xanaanooyinka waxaana loogu talagalay carruurta ilaa 3 sano jir ah. Wareegga labaad waxaa lagu dhigaa dugsiga waxaana loogu talagalay carruurta 3 ilaa 6 sano jir ah.
Shaqada baruhu maahan wax kale oo aan ahayn hubinta in carruurtu ay iskood isu maamulaan marka ay timaado nadaafadda ama wakhtiga cuntada. Marka laga reebo tan, xirfadlaha ayaa saameeya noocyada waxbarashada qaarkood sida luqadda ama xirfadaha cilmi-nafsiga. Si aad u shaqeyso sida barbaariye caruur, waa lagama maarmaan in lagu aaso shahaadada la xiriirta Waxbarashada Carruurnimada Hore iyo waxay heleen tababar ku filan waxbarida iyo waxbarashada carruurta.
Maxay muhiim u tahay in laga shaqeeyo Waxbarashada Carruurnimada Hore
Si aad si sax ah ugu raaxaysato oo aad u shaqayso xirfad noocan oo kale ah waa lama huraan in aad leedahay xirfad. Waa shahaado jaamacadeed ee ugu fiican kuwa dareema xamaasad iyo daacadnimo kuwa yaryar. Waxyaabo yar ayaa nolosha ka faa'iido badan marka loo eego in la awoodo in wax la baro oo la baro carruurta yaryar ee u heellan inay wax bartaan.
Waa run in qof kastaa aanu u qalmin maadaama la macaamilka carruurtu aanay ahayn hawl fudud ama hawl fudud. Xirfadlaha waa in uu ahaado mid dulqaad badan oo yaqaana sida loo dejiyo daqiiqadaha jilicsan. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego sida carruurtu wax u baranayso oo ay ugu kobcayaan waxbarashada, waxa uu dabooli doonaa dhinacyada ugu adag uguna adag ee mihnaddan.
Baraha ilmanimada hore waxa uu u fiirsadaa qofka ugu horeeya sida ay caruurtu u awoodaan in ay iskood wax u qabsadaan iyo sida ay u bilaabaan luuqada furaha u ah marka ay la xidhiidhaan dadka kale. Sida haddii tani aysan ku filneyn Shaqada baruhu waxay haysataa fursad shaqo oo aad u wanaagsan oo ay fududahay in suuqa la galo.
Sifooyinka barraha caruurnimada hore ee wanaagsan
Waxaa jira sifooyin badan oo loo maleeyo marka la baranayo macalinka carruurta. Midda ugu weyn waa shaki la'aan xamaasad iyo xamaasad loo qabo carruurta.
Tayada labaad waxay noqonaysaa ta dulqaadka iyo is-xakamaynta. Carruurtu ma fududa in lala heshiiyo, macalinka wanaagsani waa in uu ahaado mid degan si uu u fahmo una fahmo carruurta yaryar.
Sidoo kale macalinku waa inuu noqdaa qof urursan oo yaqaana sida loo hogaamiyo fasalka 20 ilaa 25 caruur ah. Waa lagama maarmaan in la habeeyo fasalka, samaynta la socodka gaarka ah ee ilmo kasta ama ogaanshaha sida loo gudbiyo taxane ah oo qiyam ah kuwaas oo fure u ah horumarinta marka ay dadka waaweyn.
Waa maxay fursadaha shaqo ee ay bixiso Waxbarashada Carruurnimada Hore?
Waxaa jira fursado shaqo oo badan oo ay bixiso ka qalin jebinta Waxbarashada Carruurnimada Hore. Waxa caadiga ah waa in aad noqoto macalin Waxbarashada Carruurnimada Hore ee xanaanooyinka ama dugsiyada dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay. Goobaha kale ee suurtogalka ah waa kuwa la xiriira cilmi-baarista waxbarashada ama la-shaqeynta NGO-yada caanka ah.
Marka laga reebo ka shaqeynta dugsiga ama xarumaha waxbarashada, barbaariyaha dhallaanku wuxuu ka horumarin karaa meelo kale sida isbitaallada ama xarumaha carruurta yaryar. Baraha carruurnimada hore wuxuu kaloo furi doonaa ganacsigiisa wuxuuna ka shaqayn doonaa akadeemiyada gaarka ah, ka caawinta carruurta inay wax ku bartaan meel ka baxsan dugsiga. Sida aad arki karto, waxaa jira fursado shaqo oo badan oo ay bixiso ka qalin jebinta Waxbarashada Carruurnimada Hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay Waxbarashada Carruurnimada Hore